resaka « cyberattaque » na fanafihana amin’ny alalan’ny ordinatera io ny volana septambra lasa teo, hoy ny filoha Amerikanina ary efa nilaza taminy aho fa tsy afaka ny hanaiky fotsiny an’io i Etazonia ary tokony hatsahatra izy io, saingy mbola nitohy ihany. Mety hisy, araka izany, ny valifaty hataon’i Etazonia. Manao fanadihadiana lalina moa ny CIA sy ny FBI amin’izao fotoana ary milaza fa hampiseho porofo ny amin’ity resaka asa fampiorohoroana amin’ny alalan’ny ordinatera nanjo an’i Etazonia ity. Nosokajian’ny fampahalalam-baovao tandrefana fa fanombohan’ny ady mangatsiaka eo amin’ny Etazonia sy Rosia indray ity tranga ity. Ny tena raharaha dia ilay nahakasika ny voka-pifidianana notanterahana ny 8 novambra teo ilay fisomparana informatika. Filazana izay toa mifono hevitra fa tsy azo antoka ny voka-pifidianana nahalany an’i Donald Trump. Ity farany izay efa nilaza nandritra ny fampielezan-keviny fa hanatsara ny fifandraisana amin’i Rosia.